ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၉) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Posted by danyawadi
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတရားဝင်ရပ်တည်မှု နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
(၁) ၁၉၅၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် – နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီး ချုပ်ဦးနု ၏ အသံ လွှင့်မိန့်ခွန်း တွင်မောင်တောနှင့်ဘူးသီး တောင်မြို့နယ်များတွင်နေထိုင် လျက် ရှိသောပြည်ထောင်စု သား များ သည်များသောအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုး သားဖြစ်ကြ သည် ပြောကြား ခဲ့သည်။
(၂) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဗဆွေမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နှင့် (၄) ရက်နေ့များတွင် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောမြို့ လူထုအစည်း အဝေး များတွင် ရိုဟင်ဂျာများ သည် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်းတိုင်းရင်း သား ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး စု တ စု ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့ သည်။
(၃) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးလက်အောက်နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးရုံး ကြေငြာချက် (ရက်စွဲ – ၂၀. ၁၁. ၆၁) တွင်မေယုဒေသအတွင်းနေ ထိုင်ကြသူများ ခဲ့သည်တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး များဖြစ် ကြောင်း ပါ ရှိ သည်။ (မေယုဒေသ = ယခုမောင်းတောခရိုင်)
(၄) ၁၉၆၁ မေလ (၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ ၁၉၆၅ မတ်လအထိ မြန်မာ့အသံတိုင်း ရင်းသား လူမျိုးများ ဘာသာ စကားအစီ အစဉ်တွင် တပတ်လျှင် (၁၀) မိနစ်ကျစီ (၃) ကြိမ်၊ ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားဖြင့် အသံလွှင့်ပေး ခဲ့ပါသည်။ (နှစ်သုံးဆယ် မြန်မာ့ အသံ – ဦးကျော်ငြိမ်း မာတလိ)
(၅) စာပေဗိမာန်ထုတ် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ (၉) စာမျက်နှာ ၈၉-၉၀ တွင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်တိုင်းမြောက်ပိုင်း မေယုခရိုင်တွင် လူဦးရေ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန်းခန့်ရှိပြီး ၇၅%သည် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများဖြစ်သည် ဟူ၍ အကျယ် တ၀န်းရေးသားဖော်ပြထားသည်။
(၆) ကာကွယ်ရေးဌာနမှထုတ်ဝေသော တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၆) (၁၈.၇.၆၁) နှင့် (၈.၈.၆၁) နေ့ထုတ် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၉) တို့တွင်မေယု ခရိုင်၊ မောင်းတော၊ ဘူးသီး တောင်၊ ရသေ့တောင် အနောက်မြောက်မြို့ နယ်များ တွင် အများစုအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ နေ ထိုင် ကြပြီး၊ လူနည်းစုမှာ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမီ စသောလူနည်းစုများ စွာပါ ၀င်နေထိုင် သည့်ခရိုင် ဒေသ တခုဖြစ်ပါသည် ဟူ၍ဖော်ပြပါ ရှိပါသည်။
(၇) ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၏ (၈.၇.၆၁) ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း တွင် “ကျွန်ုပ်တို့ ဒီခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကို ရိုဟင်ဂျာ လို့ခေါ်ပါ တယ်။ မေယုခရိုင် ၏ အနောက် ဘက် တွင် ပါကစ္စတန် (ယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ရှိပြီး မွတ်ဆလင် များနေကြပါတယ်။ အနောက်ဘက် မှာနေ သူများ ကို ပါကစ္စတန်ဟုခေါ်ပြီး၊ မြန်မာပြည် မှာရှိ သူများ ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တယ်။ မြန်မာ၊ ပါကစ္စတန် နယ်စပ် တခုတည်း မှာ သာ လူမျိုးတမျိုး တိုင်းပြည်ခြား၍ နေကြသည်မဟုတ်၊ တရုတ်နှင့် ဆက်စပ် နေသော နယ်စပ်တွင်လည်း ဤသို့ လူမျိုးချင်း ဆက်စပ်နေကြသည်။ ဥပမာ – ကချင်မှာ လီဆူး၊ အီကော၊ လ၀ စသည့်လူမျိုးများရှိသလို တရုတ်ပြည်တွင်လည်း ၄င်းလူမျိုးများ ရှိသည်။ ထို နည်းတူ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရှမ်း လူမျိုးများရှိသလို တရုတ်ပြည်တွင်လည်း တိုင် ဆိုသော ရှမ်းလူမျိုး များရှိကြပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် မွန်၊ ကရင်၊ မလေးရှိသလို ယိုးဒယား ဘက်တွင်လည်း ထိုလူမျိုးများ ရှိကြပါ သည်။ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တွင်လည်း ချင်း၊ လီရှော၊ နာဂလူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မှာ လည်း ရှိကြသည်။ အဲဒီ တော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောချင် တယ်။ မေယုခရိုင်ကို ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့ လူနည်းစုတစုလို့သဘောထားမယ်။ အဲဒီတော့အရင်တုန်းက ကျွန်တော် တို့မှားခဲ့တာတွေရှိရင် ခင်ဗျားတို့ အားလုံးမေ့ကြ၊ ဒီအချိန် ကစပြီး ခင်ဗျားတို့ မေယု ခရိုင်က လူတွေဟာ တို့ဗမာပြည်ထောင် စုသား၊ တို့ဗမာပြည်ထောင်စု ထဲက လူမျိုးစုတစုလို့သဘောထားကြပါ။ “ စသည်ဖြင့် အကျယ် တ၀န့်ပြောကြား ခဲ့ သည်။
(၈) ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ထုတ်မြန် မာနိုင်ငံ အထက်တန်း ပထ၀ီဝင်ဖတ်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၈၆ တွင်တိုင်း ရင်း သား လူမျိုး များပြန့် နှံ့ နေ ထိုင်ကြပုံပြရာမှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသကို ရိုဟင်ဂျာ များနေ ထိုင် ရာဒေသ အဖြစ်ပြ သထား ပါသည်။
(၉) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသင်း အဖွဲ့လည်း ထူထောင် ခွင့်လျှောက် ထားခဲ့ရာ ၃.၁၂.၅၉ ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁၂/၅၉ ဖြင့် “This is to certify that Rangoon University Rohingya Student Association is one of the Registered Associations of the University of Rangoon for the academic year 1959-1960” ဟူ၍မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
(၁၀) ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာ ယဉ်ကျေး မှုပြပွဲကို သိမ်ဖြူအားကစားပြိုင်ဝင်းအတွင်းကျင်းပပေးခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ကျေး မှုပြပွဲ တခုဖြစ်သော ကျင် ပွဲကိုပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
(၁၁) မြန်မာအသံ (၂၅) နှစ်မြောက်ငွေရတုသဘင်အဖြစ် ၁၉၇၁ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သော တ ရှင်မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေခဲ့ရာ စာမျက်နှာ ၅၅ တွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှစ၍ တိုင်းရင်း သား ဘာသာစကား အဖြစ်စတင်အသံလွှင့်ခွင့်ပြုသည့်ရက်စွဲများကိုဖော်ပြရာတွင်၁၉၄၇တင် ရှမ်း နှင့်ကချင်ဘာသာ၊ ၁၉၄၉ တွင်စကောကရင်နှင့် ပိုးကရင်ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ် တွင် ချင်း ဘာသာ၊ ၁၉၆၁ တွင် မွန်၊ ပအို့၊ လားဟူ၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့်ကယား ဘာသာတို့ အသံ လွှင့်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ မွန်၊ ပအို့၊ လားဟူ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာတို့ဖြင့် အသံ လွှင့်ခွင့်ကို ၁၅.၅.၆၁ နေ့မှစ၍ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၁.၁၀.၆၅ နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်း ခဲ့သည်။
(၁၂) ၁၉၆၀ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို အောင်ဆန်း အားကစား ကွင်းတွင် နိုင်ငံတော်မှကျင်းပခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာကျင်ပွဲခေါင်းစဉ်ဖြင့် တခမ်း တနား ကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့သည်။
(၁၃) ၂၀.၁၁.၆၀ နေ့ထုတ်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ နယ်ခြား ဒေ သအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ရခိုင်တိုင်းမင်းကြီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ မေယုနယ်ခြား ခရိုင် သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ ရိုဟင်ဂျာ များမှလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြကြောင်း၊ သူရသတ္တိရှိ သူများဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို မြတ်နိုးလိုလားပြီး သစ္စာရှိသောစိတ်ဝင် စားဖွယ် ပြည်ထောင်စု ၏လူမျိုး တမျိုးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ သည့်အပြင်မြန်မာ့အသံ(ရေဒီယို အစအ စဉ်) မှလည်း ထိုအကြောင်းအရာကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
(၁၄) ၁၈.၇.၆၁ ရက်နေ့ထုတ် တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၆) စာစောင်တွင် “မေယုနယ်မှလေ ဘယ်လိုအခြေရှိပါလိမ့်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုဒေသ၏ လူအများစုသည် ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
(၁၅) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်စိတ်ဓါတ်ရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် (၂) စောင်အနက် ၈.၈.၆၁ နေ့ထုတ် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၉) တွင် “ပျောက် ဆုံးနေသော ညီအစ်ကိုတစ်ဦးကို ရှာတွေ့သည့်ပမာနှယ်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘူး သီးတောင်၊ မောင်းတော တွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ၉၇% ရှိကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
Posted by arakanmuslim
This entry was posted on February 22, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၈)	အစွန်းရောက်ဝါဒသမား ဦးအေးမောင်က ၁၉၈၂ နိုင်ငံဥပဒေပြင်သင့်မပြင်သင့်ဝေဖန် →